မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: June 2012
Posted by Ordinary person at 5:50 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 5:48 PM No comments:
ဂျွမ္မဟ်ခွသ်ဘဟ်- ရှဗ်ဗိဘာရာသ် (ငြိမ်းချမ်းခွင့်ရသည့် ည)
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
လေးစားချစ်ခင်ရသော မွတ်စ်လင်မ် ညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ ...... ချီးမွမ်းခြင်းအပေါင်းတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အတွက်သာတည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ တော်မှသာ အကူအညီတောင်းခံပါသည်။ ခိုလှုံခွင့်နှင့် ခွင့်လွှတ်မှုကိုလည်းတောင်းခံပါသည်။ ထိုအပြင် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်အတွင်းရှိ မကောင်းမှုကို အားပေးသည့်လှုံဆော်မှုနှင့် ပြင်ပမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်အောင်ပြုလုပ်သည့် လှုံဆော်မှု များမှ ကာကွယ်မှုရရန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ ခိုလှုံပါသည်။ ထို့အပြင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့် မိသားစုဝင်များ အဆွဟာဗ်တော်များ အားလုံးအပေါ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရဟ်မသ်တော် ဘရကသ်တော်များ ကျရောက် စေသားဟုလည်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်း ခံအပ်ပါသည်။ အာမီးန် ယနေ့တင်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့..... ရှဗ်ဗိဘာရာသ် (ငြိမ်းချမ်းခွင့်ရသည့် ည) ရှာဘာန်လ ၁၅ ရက်နေ့ည မြန်မာ ပြက္ခဒိန်အရ ဆိုလျှင် ရှာဘာန်လ ၁၄ ရက် ည
ရှာဘာန်လ ဆန်းပြီဆိုလျှင် မြန်မာပြည်တွင် ရှဗ်ဗိဘာရာသ်ည ရောက်တော့မည်ကို မွတ်စ်လင်တိုင်း စိတ်စော နေမိပါသည်။ သောကြာနေ့ ခွသ်ဗဟ် များတွင်လည်း ရှဗ်ဗိဘာရာသ်ည အကြောင်း ကြိုတင် ဟောကြပြောကြ၍ လူတိုင်းသည် ထိုညကို စောင့် မျှော်နေကြပါသည်။ ရှဗ်ဗိဘာရာသ် ညသည် ရှာဘာန်လ ၁၅ ရက် ညပိုင်း ကျ ရောက်ပါသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် ညအချိန်သည် အရင်ကျရောက်ပြီး နေ့အချိန်သည် နောက်မှကျရောက်သည်။ ဥပမာ နေ့တစ်နေ့၏ မဂ်ရိဗ် အချိန်သည် ညအစဖြစ်ပြီး ၄င်းညသည် မိုးလင်းနေထွက်ချိန်ထိ ရှိ၏။ နေ့အချိန်သည် နေထွက်ချိန်မှာ နေ၀င်ချိန် အထိဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ အချိန် ၁၄ ရက်နေ့ မဂ်ရိဗ် ဆွလာသ်အချိန်သည် အစ္စလာမ်ဘာသာအရ ၁၅ ရက်နေ့ည စတင်ပြီဖြစ်သည်။ အရှေ့အာရှနိုင်ငံများ (အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလာဒေးရှ်၊ မြန်မာ) စသည့် နိုင်ငံများတွင် ရှဗ်ဗိဘာရာသ် ညကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မှတ်မှတ်ရရဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗလီဝတ်ကျောင်း တော်များ၌ လူကြီးလူငယ် မရွေး သွားရောက်ကြပြီး တရားသွားနားထောင်ကြ၊ ကဘရ်သင်္ချိုင်းများသို့ သွားရောက်ကြ၊ သေဆုံးသူ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို အပြစ်အပေါင်း မှကင်းလွှတ်စေလိုကြောင်း ဖတ်ရွတ် ဆုတောင်းကြ လေ့ရှိပါသည်။ အစွာရ် ဆွလာသ် အချိန် ကုန်လွန်သည်နှင့် မြောက်များစွာသော ရန်ကုန်မြို့ရှိ လိုင်းကားများ ဘတ်စ်ကားများ တိုက်စီကားများသည် မွတ်စ်လင်မ် တို့ကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ တာမွေသင်္ချိုင်း၊ ကန်တော်ကလေးသင်္ချိုင်း သို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ပေးကြပြီဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် မဂ်ရိဗ်အချိန်နောက်ပိုင်းတွင် ကားများ၊ လူများ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေအောင် တာမွေ နှင့် ကန်တော်ကလေး သင်္ချိုင်းများတွင် စည်းကားနေပေတော့သည်။ သင်္ချိုင်းများအတွင်းနှင့် အပြင်ဘက်တို့တွင်လည်း ကျောင်းအလှူငွေ ကောက်ခံသူများနှင့် ၄င်းတို့၏ ကောင်တာများ၊ အစ္စလာမ့်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့်ဆိုင်များ နှင့် တောင်းရမ်းသူ ရာနှင့် ထောင်နှင့်ချီ နေအောင် တွေ့နိုင်သည်။ ဆုတောင်းလာကြသူတို့ သည် မိမိတို့၏ ဆုတောင်းခြင်း၊ ပေးလှူခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပြီးသည်နှင့် မိမိအိမ်များသို့ ကိုယ်စီ ပြန်ကြတော့သည်။
အချို့ ရပ်ကွက်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များတွင် အီရှာ ဆွလာသ် ဖတ်ပြီးနောက် အီမာမ် ဆွာဟိဗ်က ရှဗ်ဗီဘာရာသ် ညမြတ် အကြောင်း သိကောင်းစရာများကို ဟောပြောလေ့ရှိပြီး လူငယ်များသည် ၄င်းတရားကို အပြီးတိုင်အောင် နားထောင်ပြီး နောက် သင်္ချိုင်းများသို့ သွားရောက်လေ့ရှိသည်။ အချို့ရပ်ကွက်ဗလီများတွင် အီရှာအချိန်ကတည်းက ည ၃ နာရီနောက်ပိုင်း စဲဟ်ရီ လာရောက်စားသုံးနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာဘုတ်များတွင် ကျေညာချက်များ တင်ပြထားလေ့ရှိသည်။ လူငယ်သဘာဝ အစားအစား အကောင်းဆုံး ချက်ပြုတ်သော ဗလီများမှ ကျွေးမွေးသော ဗီရ်ရာန၊ီ အုန်းထမင်း၊ ဟလ၀ါ နှင့် တခါတရံ ဖာလူဒါကိုပါမကျန် ပျော်ပျော်ပါးပါး လိုက်လံစားသုံးလေ့ ရှိသည်ကို မေ့မရနိုင်ပါ။ အရွယ်ရောက်လာသည့်အခါ တဖြေးဖြေး ရ်ှဗ်ဗီဘာရာသ်ည ရန်ကုန် တွင် ယခင်ကကဲ့သို့ လူမစည်တော့သည်ကို သတိထားမိသည်။ အကြောင်းကတော့ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ရေဝေး ကဗရ်စတန် တည် ဆောက်ပြီးနောက် လူတို့သည့် ဟိုဘက်သွားလိုက် ဒီဘက်သွားလိုက်နှင့် ဖြစ်နေသည်ကို သတိထားမိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယနေ့တိုင် ဘာရာသ်ညမြတ်ကို မြန်မာ အိန္ဒိယ ပါကစ္စတန် စသည့် နိုင်ငံများတွင် ဆက်လက်ကျင်းပနေသည်ကို သိရသည်။ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် အီမာမ် အများစုက ၄င်း ရှဗ်ဗီဘာရာသ်ညနှင့် ပတ်သက်လျှင် တင်ပြရှင်းပြသည်မှာ မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် အများစု အနေဖြင့် လက်ခံကျင့်သုံးကြသည်မှာ ရာစုများစွာတိုင်အောင် အယူဝါဒမကွဲပြားဘဲ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်လာ ကြသော်လည်း အာရဗ် နိုင်ငံများ၊ ထိုင်း၊ မလေး၊ အင်ဒို စသည့် ရှာဖအီ မဇ်ဟဗ် ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံများတွင် ၄င်းညအကြောင်း ပြောလျှင် လုံးဝမသိကြသလို လက်မခံကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရ ပေသည်။ ၄င်းတို့က အများအားဖြင့် ပြောကြသည်မှာ ၄င်းည၏ ထူးမြတ်ခြင်း၊ ၄င်းညတွင် အမလ်အီဗါဒသ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေခြင်းများ၊သင်္ချိုင်းများသို့ သွားရောက်ဇီယာရသ်လုပ်ခြင်းများသည် သာသနာတော်တွင် မရှိကြောင်း ပြောကြသည်။ မိမိတို့ ဆရာများ ဆွဲကိုင်ထားသော ဟဒီးဆ်တော်များကို ခိုင်မာမှုမရှိကြောင်း တင်ပြကြသည်။
ထို့ကြောင့် သူတို့နိုင်ငံတွင် ရ်ှဗ်ဗီ ဘာရာသ် အယူအဆများမရှိဟု ပြောကြလေသည်။ မိမိတို့ သိသော ရ်ှဗ်ဗိဘာရာသ် ညနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များမှာသိရ်မိဇီဟဒီးဆ်ကျမ်းတွင် အိုင်ရှာ (ရ) ၏ တင်ပြချက်ကို ဖေါ်ပြထားသည်မှာ၊ တစ်ည မိမိအိပ်ရာမှ နိုးချိန် တမန်တော်မြတ်ကို မတွေ့ရသဖြင့် လိုက်ရှာရာ အိမ်မှထွက်ခွါနေသော တမန်တော်မြတ်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုအခါ ကျွန်မ နောက်မှ လိုက်ကြည့်ရာ တမန်တော်မြတ်သည် ဂျန္နသ် ဗကိအ်ဖက်သို့ သွားနေသဖြင့် ကျွန်မလည်း နောက်မှလိုက်သွားမိသည်။ တမန်တော်မြတ်သည် ကဗရ်ရှေ့တွင် ရပ်လျှက် သေဆုံးသူတို့အတွက် ခွင့်လွှတ်မှုကိုတောင်းခံနေပေသည်။ ကျွန်မကို တွေ့လျှင် အိုအိုင်ရှာ အလ္လာဟ်နှင့် အလ္လာဟ်တမန်တော်သည် အသင့်ကို သစ္စာ ဖေါက်သည်ဟု အသင်ထင်မြင်နေသလား။ ကျွန်မက မဟုတ်ကြောင်း တမန်တော်မြတ် အနေဖြင့် ကိစ္စရှိမည်ဖြစ်၍ အခြား ဇနီးတော် တစ်ဦးဦးထံ သွားနေသလားဟုသာ ထင်မြင်ကြောင်းပြောမိသည်။ တမန်တော်မြတ်က အိုအိုင်ရှာ ဤညသည် မည်သည့်ည ဖြစ်သည်ကို အသင်မသည် သိပါသလားဟုမေးရာ ကျွန်မက အလ္လာဟ်နှင့် အလ္လာဟ်ရစူလ်သာ အသိဆုံးဖြစ်ပါကြောင်းပြောရာ၊ တမန်တော်မြတ် က ဒီညသည် ရှာဘာန်လ ၁၅ ရက်နေ့ညဖြစ်ကြောင်း ဘာရာသ်ခေါ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုသည့် ညဖြစ်ကြောင်း၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ဗနီကလ်ဗ် တို့၏ သိုးများပေါ်ရှိ အမွှေးများ အရေအတွက်နှင့် တူညီ သော လူတို့၏ အရေအတွက်ကို အပြစ်ငရဲများမှ ခွင့်လွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါသည်။ ထိုအကြောင်းများကြောင့် မိမိတို့သည်
(၁) ကဘရ်စတန်သင်္ချိုင်းများ သို့သွားရောက်ခြင်း
(၂) တစ်နေ့လုံးအတွက် ဆွလာသ် ၅ ကြိမ် ရအောင် ဖတ်ခြင်း
( ၃) မဂ်ရိဗ် ဆွလာသ် အပြီး နဖိလ် ဆွလာသ် ၂ ရကအသ် ၃ ကြိမ် ဖတ်ခြင်း
(၄) စူရာ ရာစီးန် ၃ ကြိမ်ဖတ်ခြင်း
(၅) ညအခါ သဟဂ်ျဂျွဒ် နမာဇ် ဖတ်ခြင်း
(၆) ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ဖတ်ခြင်း
(၇) ဇိကိရ် ရသလောက်လုပ် ခြင်း
(၈) ဆွလာသ် သစ်ဘိဟ် ဖတ်ခြင်း
(၉) စဟ်ရီစားသောက်ခြင်း ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်း
(၁၀) တတ်အားသ၍ အလှူဒါနပြုလုပ်ခြင်း စသဖြင့် မိမိတို့၏ ရှဗ်ဗိဘာရာသ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အမလ်အိဗါဒသ်များဖြင့် ကျေနပ်စရာဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသည်။
၅။ အိုင်အိရှာ (ရ) မိန့်သည်မှာ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် ရိုဇာစောင့်ထိန်းပြီဆိုလျှင် မိမိတို့ထင်မြင်မိသည်မှာ သခင်သည် ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းတော့မည်မဟုတ်ဟု ဟူ၍ဖြစ်သည်။ . ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဆို လျှင် နောက်ထပ် ရိုဇာစောင့်ထိန်းတော့မည်မဟုတ်ဟု ထင်မြင်ကြသည်။ တမန်တော်မြတ် သည် ရမ်ဇာန်လမှလွဲလျှင် မည်သည့်လတွင်မှ တစ်လ လုံးပြည့် အောင် ရိုဇာစောင့်ထိန်းခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ရှာဘန်လတွင်မူ အခြားသောလများထက် ရိုဇာအများဆုံး စောင့်ထိန်း တော်မူလေ့ရှိပါသည်။
၆။ အိုင်အိရှာ (ရ) တင်ပြသည်မှာ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် ရှာဘာန်လ၏ ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းကို အထူး ဂရုပြုစောင့်ထိန်းသည်ကို တွေ့ရသည်။ သခင်သည် ရက်အနည်းမှလွဲ၍ ရှာဘာန် တစ်လလုံး ရိုဇာစောင့်ထိန်း လေ့ရှိသည်။ မသိလျှင် သခင်သည် ရှာဘာန်တစ်လလုံး ရိုဇာစောင့်ထိန်းသည်ဟု ထင်မြင်ရပါသည်။ စလီမာ (ရ) တင်ပြသည်မှာ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) အား မိမိသည် လနှစ်လတွင် တနှစ်လုံးပြည့် အောင် ရိုဇာစောင့်ထိန်းတော်မူလေ့ရှိ သည်။ ထိုလနှစ်လမှာ ရမဇာန် နှင့် ရှုာဘာန်လတို့ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ ဟဒီးဆ်များကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် ရှာဘာန်လတွင် ရက်များစွာ ရိုဇာဥပုတ်စောင့်ထိန်း လေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုသို့စောင့်ထိန်းခြင်းသည် တမန်တော်မြတ်အပေါ်တွင် ဖရဇ် တာဝန်တစ်ရပ်မဟုတ်သော်လည်း တမန်တော်အနေဖြင့် တဆိုက်မတ်မတ် ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိရသည်မှာ ရှာဘာန်လသည် မြင့်မြတ်သော လဖြစ်သည်မှာ သေချာခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အထူးသတိထားသင့်သည်မှာ ရှာဘာန်လ ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းသည် သန်မာသော စွမ်းဆောင်နိုင် သော သူတို့အတွက် သာဖြစ်သည်။ ရှာဘာန်လရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် အားပြတ်ကာ ရမ်ဇာန်လ ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်း မပြုလုပ်နိုင်သည့် အခြေအနေကို ရောက်မသွားရန် သည်အလွန်ပင်အရေးကြီးပါသည်။ သို့ဖြင့်၍ မည်သူမဆို ရှာဘာန်လ ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်ခြင်း၊ ရမ်ဇာန်လတွင် ရိုဇာမစောင့်ထိန်းနိုင်လောက်အောင် အားအင်ရုတ်ရော့ သွားအောင်ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် မိမိတို့အနေဖြင့် ရှာဘာန်လတွင် ရိုဇာမစောင့်ထိန်းရန်သာဖြစ်သည်။ ရမ်ဇာန်လမြတ်၏ ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းသည် ပိုမိုမြင့်မြတ်သည်ကို မိမိတို့ မမေ့ကြရန် အရေးကြီးပါ သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) မိန့်သည်မှာ သာမန် မွတ်စ်လင်မ်ထုအနေဖြင့် ရမ်ဇာန်လမရောက်ခင် နှစ်ရက် ခန့်အတွက် လုံးဝ ရိုဇာမစောင့် ထိန်းရန် လမ်းညွှန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“မည်သူမဆို ရမ်ဇာန်လမြတ်၏ ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းကို ရှာဘာန်လ၏ နောက်ဆုံး ရိုဇာ တစ်ရက် သို့မဟုတ် နှစ်ရက်ဖြင့် အစမပြုကြပါနှင့်” ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ အဘူဟိုရိုင်ရာ (ရ) တင်ပြထားသည်မှာ “ရှာဘာန်လ၏ ပထမ နှစ်ပတ် ကုန်လွန်သွားပြီးနောက် ရိုဇာမစောင့် ထိန်းကြရ” ဟု၍ဖြစ်ပါ သည်။ သဘောမှာ ရှာဘာန်လ၏ နောက်ဆုံး နှစ်ပတ်တွင် မည်သူမျှ ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းမပြုကြနှင့်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအား ဖြင့် နောက်ဆုံးနှစ်ပတ် စားစားသောက်သောက်ဖြင့် ရမ်ဇာမ်လအတွက် ပြင်ဆင်ထားကြရန် သတိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ရှာဘာန်လ၏ ထူးမြတ်မှုတစ်ခုသည် ၄င်းလတွင် ညတစ်ညရှိပါသည်။ ၄င်းညကို “လိုင်လတွလ်ဘာရာသ် အပယ်ငရဲမှ လွတ်မြောက်မှုရနိုင်သောည” ဟုခေါ်ပါသည်။ ၄င်းညသည် ရှာဘာန်လ ၁၄ ရက်နေ့နှင့် ၁၅ ရက်နေ့ ည ၏ ကြားညဖြစ်ပါသည်။ ဘာရာသ်ည၏ ထူးမြတ်နှင့် ပတ်သက်သော ဟဒီးဆ်တော်များကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ အိုင်အိရှာ (ရ) တင်ပြသည်မှာ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် တစ်ရက် သဟဂ်ျဂျွဒ် ဆွလာသ် ဖတ် နေစဉ် စိဂ်ျဒဟ် ပြုလုပ်နေသည် မှာ အတော်ပင်ကြာမြင့်သွားပြီဖြစ်သည်၊ မည်မျှကြာသနည်းဟူမှု ကျွန်မအနေဖြင့် ထင်လိုက် သည်မှာ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ကွယ်လွန်သွားပြီလားဟု ထင်လိုက်ရပါသည်။ ကျွန်မလည်း အိပ်နေရာမှထလာကာ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ လက်မကို မကြည့် လိုက်ရာ လှုပ်ရှားလာသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် စိတ်သက်သာရလာပြီး မိမိနေရာသို့ ပြန်လာလိုက်ပါသည်။
ထို့နောက် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) စိဂ်ျဒဟ် လုပ်နေရင်း နုတ်မှ အောက်ပါ အတိုင်း ရေရွတ်သည်ကို ကြားရပါသည်။ “ ကျွန်တော်မျိုးသည် အရှင်မြတ်၏ အပြစ်ပေးခြင်းကို အရှင်မြတ်၏ ခွင့်လွှတ်မှု အရိပ်အောက်တွင် ခိုလှုံပါသည်၊ ကျွန်တော်မျိုးသည် အရှင်မြတ်၏ မနှစ်သက်မှုကို အရှင်မြတ်၏ နှစ်သက်မှု အရိပ်အောက်တွင် ခိုလှုံပါသည်၊ ကျွန်တော်မျိုးသည် အရှင်မြတ်၏ ဂရုဏာတော်၏ အရိပ်အောက် တွင် ခိုလှုံပါသည်၊ ကျွန်တော်မျိုးသည် အရှင်မြတ် ထိုက်တန်သင့်မြတ်သည့် အနေအထားမျိုးဖြင့် ချီးမွန်းနိုင်ခြင်း အလိုငှာ မတတ်သာလေပြီဖြစ်သည်၊ အရှင်မြတ်သည် မိမိ၏ သတ်မှတ် တည်ရှိမှုအနေအထားဖြင်ပင် တည်ရှိ နေပါသည်”။ ထို့နောက် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် မိမိ၏ ဆိဂ်ျဒဟ် မှထလာကာ ဆွလာသ်ကို အဆုံးသတ် လိုက်ကာ မိမိကို ပြောပါသည်၊ “ အို အိုင်ရှာ အသင်အနေဖြင့် အလ္လာဟ်တမန်တော် သည် အသင့်ထံပါးမှ စွန့်ခွါထွက်သွားပြီဟု ထင်ပါသလား၊ အိုင်ရှာ (ရ) အို တမန်တော် ကျွန်မ အနေဖြင့် အလွန်စိုးရိမ် သွားသည်မှာ သခင် စိဂ်ျဒဟ် လုပ်နေသည်မှာ ကြာလွန်းသဖြင့် သခင်၏ ၀ိဥါည် ထွက်သွားပြီ ဖြစ်ပြီးလားဟု ထင်မြင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) မိန့်သည်မှာ အိုအိုင်ရှာ အသင်သည် ဒီည မည်သည့်ညဖြစ်သည်ကို သိပါသလား၊ အိုင်ရှာက အလ္လာဟ်နှင့် အလ္လာဟ် တမန်တော်သာ အသိဆုံးဖြစ်ကြောင်းပါဟု ပြောပါသည်။ ထိုအခါ တမန်တော်မြတ်က ဒီညသည် ရှာဘာန်လ၏ ၁၅ ရက်မြောက်ည ဖြစ်သည်။ ဤညတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် သည် မိမိ၏ ကျေးကျွန်များကို ကြည့်ရှုပြီးနောက် ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်သော မှန်ကန်သောသူတို့အား အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပြီး မိမိ၏ ဂရုဏာ တရားကို ချီးမြင့်တော်မူလေသည်။ သို့သော် မမှန်ကန်သူ အပြစ်လုပ်သူတို့အတွက် ပြစ်ဒါဏ်များ သတ်မှတ်တော်မူပြီး သူတို့အနေဖြင့် ခွင့်လွှတ်မှု မတောင်းခံသမျှ ကာလပတ်လုံး ၄င်းအပြစ်ဒါဏ်များကို တည်ရှိစေလေသည်။ . အိုင်ရှာ (ရ) တင်ပြသည်မှာ ထိုညမြတ်တွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိုးကောင်းကင် အောက်သို့ ဆင်းသက် လာပြီးနောက် မြောက်များစွာသော လူများ ၄င်းတို့၏ အရေအတွက်သည် ဗနီခလ်ဗ် အမျိုးနွယ်ဝင်တို့၏ သိုးများ၏ အမွေးအရေအတွက်ထက် ပင်များပြားသော လူတို့အား အပြစ်များမှ ခွင့်လွှတ်တော်မူလေသည်။ မဒီနာ မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဗနီကလ်ဗ် ဟူသော အမျိုးနွယ် ၀င်တို့တွင် များစွာသော သိုးများရှိပြီး ၄င်းသိုးတို့၏ အမွှေးများအရေအတွက်သည် မည်မျှများလ်ိမ့်မည်ကို မိမိတို့ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့် မြောက်များ စွာသော လူတို့၏ အရေအတွက်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့၏ ပြစ်ဒါဏ်များကို ခွင့်လွှတ်မည်ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဟဒီးဆ်တော်တစ်ပုဒ်တွင် အိုင်ရှာ (ရ) ကပင်တင်ပြခဲ့သည်မှာ ““၄င်းညတွင် ဗနီကလ်ဗ် တို၏ သိုးများ၏ အမွှေးများ အရည်အတွက်နှင့် ညီမျှသော လူအရေအတွက်အား ဂျဟန္နမ် ငရဲမီးလောင် မြိုက်နေရာမှ ခွင့်လွှတ်မှု ပေးသည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ခွင့်လွှတ် လိုက်သူများတွင် မည်သူမည်ဝါကို ခွဲခြားခြင်းမပြုဘဲ တနည်းအားဖြင့် ၄င်းတို့အတွင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ရှိရ်က် လုပ်သူများ၊ နှလုံးသားများအတွင်း မကောင်းမှု များဖြင့် ပြည့်နက် နေသူများ၊ ဆွေမျိုးညာသကာနှင့် အဆက်ဖြတ်ထားသူများ၊ ခြေမျက်စိအောက် ဂုဏ်မောက် သလို လုံချည် ဘောင်းဘီ ၀တ်ကြသူများ၊ အရက်သေစာ သောက်စားသူများ စသဖြင့် မခွဲခြားဘဲ အပယ် ငရဲမှ ထုတ်ယူကာ အပြစ်ခွင့်လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မုအာဇ် (ရ) တင်ပြသည်မှာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ) မိန့်တော်မူသည်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် သည် ဘာရာသ်ည အခါတွင် မိမိဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည့် လူအပေါင်းတို့ကို ကြည့်ရှုတော်မူလျှင် ၄င်းတို့ အားလုံးကို အပြစ်အပေါင်းမှ ခွင့်လွှတ်တော်မူလေသည်။ သို့သော် ၄င်းတို့အနက် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်အား ရှိရ်က် လုပ်သူအပေါင်းတို့နှင့် စိတ်နှလုံးများအတွင်း မကောင်းစိတ်ထားသူများ မပါဝင်ပါလေ။ ဖေါ်ပြပါ အဟာဒီးဆ် များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အများစုသော ပညာရှင်များက အချို့ဟဒီးဆ်တော်များသည် ခိုင်မာမှုရှိပြီး အချို့သည် အားနည်းချက်များရှိသည်ကို လက်ခံကြပါသည်။ သို့သော် အချို့သောပညာရှင်တို့က ဟဒီးဆ် အချို့၏ ခိုင်မာမှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များအပေါ် လက်ခံမှုမပြုကြဘဲ ဘာရာသ်ည၏ ထွတ်မြတ်မှုကို ငြင်းပယ်လိုက်ကြသည် လည်းရှိပါသည်။ ၄င်းတို့၏ ညင်းပယ်မှုကို မည်သို့မှ တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုသော်လည့်း ၊ အထက်ပါ ဟဒီးဆ်များကို စုပေါင်းကြည့်လိုက်သည့်အခါ၊ များစွာသော ပညာရှင်တို့သည် ၄င်းည၏ ထွတ်မြတ် မှုကို လက်ခံကာ အမလ် အိဗါဒသ် လုပ်ကာ အကျိုးပွားများလာသည်မှာ နှစ်အဆက်ဆက် ခေတ် အဆက်ဆက် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဘာရာသ်ည၏ ထူးမြတ်မှုကို နားလည်လက်ခံသောသူတို့အတွက် ၄င်းညကို ပိုင်နိုင်စွာအသုံးချနိုင် လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၄င်းတစ်ညတာအတွက် နိုးနိုးကြားကြား ရှိနေသင့်သည်။
သို့သော် ညတာ၏ အချိုအစိတ်အပိုင်းတွင် နိုးကြားနေလျှင်လည်း ကောင်းလှပါသည်။ ၄င်းည၏ အစိတ်အပိုင်းသည် ညဦးပိုင်းဖြစ်စေ မိုးလင်းပိုင်းဖြစ်စေ ပြဿနာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၄င်းနောက် အောက်ဖေါ်ပြပါ အိဗါဒသ်များကို တတ်အားသ၍ လုပ်နိုင်ပါသည်။
အမှန်တော့ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) တောင်းခံခဲ့သည် တောင်းဆုဒိုအာများသည် စံနမူနာယူထိုက် သည့် ဒိုအာများပင်ဖြစ်သည်။ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိမှု၊ ပြည့်စုံကုံလုံမှု၊ တင်ပြချက်များ လေးနက်မှု၊ စသည့် ဘက်ကကြည့်လျှင် မည်သူမျှ ယနေ့တိုင် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ကဲ့သို့ ဒိုအာတောင်းခဲ့နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်လူသားမျှ အဆိုပါ ဒိုအာများကို ယှဉ်ပြိုင် ရေးသားတောင်းဆိုနိုင်မည်မဟုတ် ပါ။ သို့ဖြစ်၍ မိမိတို့အနေဖြင့် ၄င်းဒိုအာများကို တတ်နိုင်သ၍ လေ့လာကာ နေ့စဉ်မိမိတောင်းဆို သည့်ဒိုအာဖြစ် အစဉ်တောင်းဆိုနေသင့်သည်။ အကယ်၍ မိမိအနေဖြင့် ဒိုအာမူရင်းအတိုင်း အာရဗီ ဘာသာဖြင့် မတောင်းနိုင်ပါကလည်း စိတ်ပျက်စရာမလိုပါ။ မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင် ဘာသာစကား မြန်မာလိုတတ်က မြန်မာလို အင်္ဂလိပ်လိုတတ်က အင်္ဂလိပ်လို တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ အချို့မိတ်ဆွေများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ညအခါ ထခြင်း ဖတ်ရွတ်ခြင်း မပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် စိတ်ပျက်မနေသင့်ပါ။ အချို့သည် နေမကောင်းသည့်အတွက်၊ အချို့က ခရီးထွက်နေခြင်း၊ စာပေလေ့လာ နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ရာသီလာခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နေသည့်ကာလဖြစ်ခြင်း စသည့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိ နေနိုင်တတ်ပါသည်။ ထိုသူတို့အဖို့ အထူးသဖြင့် ဆွလာသ် ၅ ကြိမ်ကို မပြတ်တန်းဖတ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ် သည်။ တတ်နိုင်ပါက ဇိကိရ်ကို အဆက်မပြတ် ဖတ်နေသင့်သည်။ သွားသွားလာလာ စားစား သောက်သောက် လုပ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဇိကိရ်တွင် အထက်တွင် ဖေါ်ပြသည့် အတိုင်း တမန်တော်မြတ် (ဆွ) အပေါ် ဒရူးဒ် ဆွလ၀ါသ် တတ်အားသ၍ ဖတ်နေသင့်သည်။ ဘာရာသ်ညတွင် ကျွန်ုပ် မြန်မာနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလာဒေးရှ်၊ ပါကစ္စတန်၊ အီရန် စသည့်နိုင်ငံများတွင် သင်္ချိုင်း သို့သွားရောက်ကြပြီး သေဆုံးလေသူ မိဘဖိုးဖွားများအတွက် ခွင့်လွှတ်မှုတောင်းခံလေ့ရှိသည်။ အချို့သော် ပညာရှင်များက ထိုညတွင် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် အိပ်နေရာမှ တိတ်တစိတ် ဂျန္နသွလ်ဘကီဟ် သင်္ချိုင်းသို့သွားရောက်ပြီး သေဆုံးလေသူများအတွက် ငြိမ်းချမ်းမှု ကင်းလွတ်မှုကို တောင်းခံခဲ့ကြောင်း တင်ပြကြပါသည်။ သို့သော် ၄င်းဟဒီးဆ်တော်များ သည် အလွန်ပင် အထောက်အထား ခိုင်မာမှု အားနည်းပါးလွန်းသည့်အတွက် ယနေ့၎င်းလုပ်ရပ် ကို မလုပ်ကြတော့ပေ။ သို့သော် များစွာသောသူတို့က ၄င်းလုပ်ရပ်ကို မွတ်စ်သဟဗ် အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ လုပ်ကြသည်။ သို့သော် မှတ်ထားသင့်သည်က ၄င်းလုပ်ရပ်သည် အရေးတကြီး မဖြစ်မနေလုပ်ရမည့် အိဗါဒသ် မဟုတ်သလို ပုံမှန်လုပ်စရာလည်း မလိုအပ်သည့် အိဗါဒသ် တခု ဖြစ်ကြောင်းသိရမည်။
တကယ်တော့ မိမိအိမ်တွင် ဖတ်ရွတ်ပြီး သေဆုံးသူများအတွက် ဖတ်ရွတ်ကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမှုကို တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ ၄င်းညတွင် အထူးသတိထားသင့်သည်မှာ မကောင်းမှုနှင့် တတ်အားသ၍ ဝေးသည်ထက် ဝေးအောင်နေ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာရာသ်ညတွင် ဘာတွေလုပ်သင့်သနည်းဆိုသည်ကို နားလည်သည့်အခါ မိမိတို့အနေဖြင့် ၄င်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်နေခြင်းသည် မကောင်းမှုမှ ကင်းဝေးအောင်နေနိုင်ရန် အတွက် အကောင်းဆုံးအခွင့် အရေးတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ စင်စစ် ၄င်းညသည် မိမိတို့သည် ကိုယ်ကိုယ်ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ ၀ကွက်အပ်နှံ ထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးလုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် မနှစ်သက်သည့် အလုပ်မှန်သမျှကို မိမိတို့သည် အဆင်ပြေစွာ ရှောင်ကြဉ်နိုင်မည့် အခြေအခြေအနေများ ရရှိလာနိုင်သည်။ . အထူးသဖြင့် မိမိတို့စိတ်တွင် အတင်းပြောခြင်းနှင့် မကောင်းမှုကို တွေးခြင်း မဖြစ်အောင် အထူးသတိပြုရမည်။ မကောင်းမှု၏ အတွေးသည် မကောင်းမှုကို ပြောဖြစ်စေသလို လုပ်လည်း လုပ်ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါ ဟဒီးဆ်တော်တွင် တင်ပြခဲ့သည်မှာ မကောင်းစိတ်ကို နှလုံးသားတွင် မရှိစေခြင်း ဆိုသည့်အချက်ကို ကောင်းကောင်းသတိပြုစေချင်ပါသည်။ အချို့သော မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် ၄င်းညတွင် အထူးစားဖွယ်သောက်ဖွယ်များကို ချက်ပြုတ်ကြခြင်း အကြီးအကျယ် ကျွေးပွဲ မွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များ၊ သင်္ချိုင်းများကို ဆင်ယဉ်ခြင်း၊ မီးထွန်းကြခြင်း၊ အမွှေးနံ့သာများ လိမ်းလည်သပ္ပယ်ကြခြင်း အချို့နေရာများတွင် ပွဲလမ်းသဘင်များလုပ်ကြခြင်း၊ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ငန်းများ အကြီးအကျယ်လုပ်ကြခြင်း၊ စသည့်လုပ်ရပ်များသည် အခြေအမြစ်မရှိသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ရပ်များဖြစ်သဖြင့် ၄င်းတို့ကို မလုပ်သင့်ပါ။ မွတ်စ်လင်မ်များ ထိုသို့လုပ်ခြင်းသည် အခြားဘာသာဝင်တို့၏ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၏ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို ကူးချလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်ကို သတိထားရမည်။ သိလျှက်နှင့် ဆက်လက်လုပ်လျှင် အပြစ်ထိုက်သည်ကို သိသင့်သည်။ မိမိကိုယ်၌ကလည်း ထိုသို့လုပ်နေလျှင် မိမိလုပ်ရမည့် ကောင်းမှုကုသိုလ်များကို မလုပ် နိုင်သဖြင့် မိမိ၏ ကုသိုလ်ရှာဖွေမှု အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း သဘောပေါက်ရမည်။ အချို့သောသူတို့သည် ထိုညတွင် ဘာရာသ် ည၏ ထူးမြတ်မှုများကို ရှည်လျှားထွေပြားစွာ တရားတဘောင် ဟောကြားနေသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် အခြားသူများ၏ တန်ဖိုးရှိသော အချိန်ကို ဖြုန်းစေသည့်အပြင် မိမိ၏ အချိန်လည်း ကုန်ဆုံးသည်ကို သတိပြုရန် လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ဘာရာသ်ည အကြောင်းကို အခြားသူများသိလိုစေပါက ကြိုတင်ဟော ပြောအကြောင်းကြားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤညသည် မိမိတို့ကိုယ်စီ မိမိတို့အတွက် ကြိုးပမ်းရန် သာလိုအပ်သည်ကို သတိပြုရမည်။
တရားအားထုတ်ရာတွင်လည်း တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကြိုးပမ်းရမည်။ စုပေါင်း ဆွလာသ်ဝတ်ပြုခြင်း၊ စုပေါင်း ဇိကိရ်ပြုလုပ်ခြင်းများ မပြုလုပ်သင့်ပါ။ ဤညသည် မိမိတို့အနေဖြင့် မိုးမြေအဆုံး စကြာဝဠာတစ်ခွင်လုံး၏ ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရေအတွက် ကြိုးပမ်းနေချိန်ဖြစ်သဖြင့် မိမိနှင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အကြား အခြားမည်သူကိုမျှ မလာရောက်နိုင်ရေး၊ အ၀င်ရောက်နိုင်ရေးကို မိမိတို့ကောင်းကောင်းကြီး သတိထားသင့် ပါသည်။ ဥပမာ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ကိုကြည့်လျှင် ဤညမှာ တစ်ကိုယ်တည်း အိဗါဒသ် လုပ်နေတာကို မြင်ရသိရလိမ့်မည်။ ဇနီးတော် အိုင်ရှာ (ရ) သည် မိမိဘာသာ ရှိနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရမည်။ တမန်တော်မြတ်သည် သူမကို မိမိအိဗါဒသ် မှာ မပါဝင်စေခဲ့ဘူး။ တစ်ကိုယ်တော် အိဗါဒသ် လုပ်ခြင်းကိုသာ ပေါ်လွင်စေပါသည်။ တမန်တော် မြတ်သည် မစ်ဂျိဒ် နဗ၀ီကို ဆင်ယင်ခြင်း၊ မီးရောင်စုံထွန်းခြင်း၊ အခြားသူများကိုခေါ်ပြီး အိဗါဒသ်လုပ်နေခြင်းကိုလည်း မတွေ့ရသဖြင့် ဘာရာသ်ည၏ အိဗါဒသ်သည် တစ်ကိုယ်တော် သီးသန့်လုပ်သင့်ကြောင်း၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များတွင် လုပ်ပါကလည်း စုပေါင်း လုပ်ခြင်းကိုသာ ရှောင်ရှားပြီး မိမိဘာသာ တစ်ကိုယ်လည် ထောင့်တစ်နေရာတွင် လုပ်သင့်ပါသည်။ ပညာရှင်အများစုအနေဖြင့် ၄င်းညတွင် စဲဟ်ရီစားသုံးပြီး ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရိုဇာဥပုတ် စောင့်ထိန်းကြ လေ့ရှိပါသည်။ ၄င်းရိုဇာသည် မွတ်စ်သဟဗ် အဆင့် တနည်းအားဖြင့် လုပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုသည့်အဆင့် သာရှိပါသည်။ လုပ်ပါက ကောင်းပြီး မလုပ်ပါကလည်း အပြစ်မရှိကြောင်း၊ ဖရဇ် တာဝန်မဟုတ်ကြောင်း သိစေပါသည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) အနေဖြင့် ၄င်းရက်တွင် နဖိလ် ရိုဇာ စောင့်ထိန်းသင့်ကြောင်း အထူးသတိပေးခဲ့ပါသည်။ အချို့ကတော့ ဤ ဟဒီးဆ်တော်ကို မမှန်ကန်ကြောင်း ပြောကြပေလိမ့်မည်။ သို့သော် အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည့် ဟဒီးဆ်တော်များကို ကြည့်လျှင် တမန်တော်မြတ်သည် ရှာဘာန်လ၏ ရိုဇာကို မပြတ်တမ်းနှင့် အများဆုံးရိုဇာစောင့်ထိန်းခဲ့သည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် တမန်တော်မြတ် ရိုဇာစောင့်ထိန်းခဲ့ခြင်းကို ငြင်းဆိုနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။
ထို့အပြင် မြောက်များစွသော ပညာရှင်များ မိမိတို့၏ အကြီးအကဲများသည် ရှာဘာန်လ၏ မြင့်မြတ်ခြင်းအကြောင်း ရှာဘာန်လတွင် ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းအကြောင်းကို နှစ်ပေါင်း ရာစု ထောင်စု ချီကာ တင်ပြ လုပ်ပြ ခဲ့သည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘာရာသ် ည သည် အမှန်ဖြစ်ခြင်း ၄င်း၏ အိဗါဒသ်များ နေ့အခါ ရိုဇာစောင့်ထိန်းခြင်းများ အကျိုးကျေးဇူးများသည် မှန်ကန်သည်ဟု တင်ပြလိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အမြဲကြားနေရသည့် ကျွန်တော်တို့၏ ဆရာသခင် မော်လာနာ ဗရှိရွလ္လာဟ် ဆွာဟိဗ် (ရ) ၏ ရန်ကုန်မြို့ ၁၃၆ လမ်း မဒါးဗလီတွင် အီရှာဆွလာသ် အပြီး တရားဟော်ပြောမှုကိုမူ ကျွန်ုပ်တို့သည် မဖြစ်မနေ သွားနားထောင်မိသည်။ ဆရာကြီးက အထက် တွင် ဖေါ်ပြသည့် ဟဒီးဆ်တော်များ၊ ကို တင်ပြလေ့ရှိပြီး အထူးသတိပေးတတ်သည်မှာ ၄င်းညတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အမလ် အိဗါဒသ် များတွင် “ဆွလာသွလ် သစ်ဘီဟ်” ကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြရန် ပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းဆွလာသ်တွင် ဖတ်ရမည့် ဇိကိရ်မှာ “စူဗဟာနလ္လာဟိ ၀လ်ဟမ်ဒုလိလ္လာဟိ ၀လာအိလာဟ အိလလ္လာဟု ၀လ္လာဟု ၀အက်ဘရ်” ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီးတင်ပြသည့် “ဆွလာသွလ် သစ်ဘီဟ်” ဖတ်နည်းမှာ ပထမ ၄ ရကအသ် နိယသ်ချီပြီးနောက် အလ္လာဟုအက်ဘရ် သက်ဗီရ် ဖတ်ပြီး
(၁) စူရာဖာသိဟအရင် အထက်ပါဇိကိရ် ကို ၁၅ ခေါက်ဖတ်ပါ
(၂) စူရာဖါသိဟဖတ်ပြီးနောက် ၄င်းဇိကိရ်ကို ၁၀ ခေါက်ဖတ်ပါ
(၃) ရူကုအ် စူဘဟာနလ္လာရဗ်ဗိယလ်အဇီးမ် ၃ ခါ ဖတ်ပြီး ၄င်းဇိကိရ်ကို ၁၀ ခေါက်ဖတ်ပါ
(၄) ရုကုအ်အပြီး ပြန်မတ်တတ်ရပ်ချိန်တွင် ၄င်းဇိကိရ်ကို ၁၀ ခေါက်ဖတ်ပါ
(၅) ပထမ စိဂ်ျဒဟ်တွင် စူဘဟာနလ္လာရဗ်ဗိယလ်အာ့လာ ၃ ကြိမ်ဖတ်ပြီး နောက် ၄င်းဇိကိရ်ကို ၁၀ ခေါက်ဖတ်ပါ
(၆) ပထမ စိဂ်ျဒဟ် အပြီး ပြန်ထိုင်ချိန်တွင် ၄င်းဇိကိရ်ကို ၁၀ ခေါက်ဖတ်ပါ
(၇) ဒုတိယ စိဂ်ျဒဟ်တွင် စူဘဟာနလ္လာရဗ်ဗိယလ်အာ့လာ ၃ ကြိမ်ဖတ်ပြီးနောက် ၄င်းဇိကိရ်ကို ၁၀ ခေါက်ဖတ်ပါ။
ဤသို့ဖြင့် (၁) ရကအသ်တွင် ၄င်းဇိကိရ် အကြိမ် ၇၅ ခေါက်ဖတ်မိသွားလိမ့်မည်။ ၄ ရကအသ် ဖတ်မိလျှင် အကြိမ်ပေါင်း ၃၀၀ ဖတ်မိလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ ဆွလာသွလ် သစ်ဘီဟ် ပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးဆက်လက်တင်ပြသည်မှာ မဂ်ရိဗ် ဆွလာသ်အပြီးတွင် နဖိလ် ဟာဂျသ် ၂ ရကအသ် ၃ ကြိမ် ဖတ်ကာ အကြိမ်တိုင်း အတွက် ပထမအကြိမ်တွင် မိမိ အသက်ရှည်ကျန်းမာရန်အတွက်၎င်း၊ ဒုတိယ အကြိမ်တွင် ရိုဇီရိက္ခာ တိုးပွားရန်အတွက်၎င်း၊ တတိယအကြိမ်တွင် ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးရန်အတွက် ၄င်း နိယသ်ထားကာ ဖတ်သင့်ကြောင်းတင်ပြလေ့ရှိပါသည်။ ဆက်လက်တင်ပြသည်မှာ စူရာ ရာစီးန် ကို ၃ ကြိမ် အထက်ပါ နိယသ်ဖြင့် ဖတ်သင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခေါက် ဖတ်ပြီးတိုင်း အောက်ပါ ဒိုအာကို ဖတ်သင့်ကြောင်းတင်ပြပါသည်။ . မဂ်ရိဗ် ဖတ်ပြီးနောက် ဆွလာသ် ၂ ရကအသ် ၃ ကြိမ် ဖတ်သည်ဆိုရာတွင် ၆ ရကအသ် ဖြစ်မည်။ ၂ ရကအသ် ဖတ်ပြီးတိုင်း အောက်ပါ ဒိုအာကို တစ်ခေါက်ဖတ်ပါက အလွန်ကောင်းပါသည်။ ထိုနည်းအတိုင်း စူရာ ရာစီးန် ဖတ်ရာတွင်လည်း တစ်ခါ ဖတ် ပြီးတိုင်း အောက်ပါဒိုအာကို တစ်ခေါက်ဖတ်ပါက အလွန်ကောင်းပါသည်။ ဒိုအာတောင်းသည့်အခါတွင်လည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် မိမိအလိုဆန္ဒများကို တောင်းခံ သင့်ပါသည်။ မိမိအလိုဆန္ဒများကို တောင်းခံသည့်အပြင် မိမိတို့ သိလျှက်ဖြစ်စေ မသိ၍ဖြစ်စေ ကျူးလွန်ခဲ့သည် အပြစ်များကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ပါလို ကြောင်း တောင်းခံသင့်သည်။
အများအားဖြင့် မိမိတို့ ကျူးလွန်တတ်သည့် အပြစ်ဂိုနာများတွင်
(၁) ကုဖုရ်နှင့် ရှိရိက် လုပ်ခဲ့မိခဲ့လျှင် ၄င်း၊
(၂) မိမိညီအကိုများနှင့် ရန်လိုမုန်းထားမိခဲ့ လျှင်၎င်း၊
(၃) ဆွေမျိုးသားခြင်းများ၏ အခွင့်အရေးကို မပေးခဲ့မိလျှင်၎င်း၊
(၄) မိဘ များကို ကလန်ကဆန် လုပ်ခဲ့မိသည်များကို၎င်း၊
(၅) အရက်သေစာ သောက်စားမိခဲ့သူလျှင်၎င်း၊
(၆) သူတစ်ပါးကို မတရားလုပ်ခဲ့မိ ခဲ့လျှင်၎င်း၊
(၇)ခိုးယူ လိမ်လည် ခဲ့မိလျှင်၎င်း၊
(၈) သူများအကြောင်း မတရားအတင်းပြောခြင်း၊ ဂုံးတိုက်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးကို ဂျောက် ကျအောင် လုပ်ခဲ့ခြင်း၊ စသဖြင့် မိမိတို့၏ ပြစ်မှုအပေါင်းကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ စိတ်ရောကိုယ်ရော နှလုံးအပါ လိုလိုလားလားဖြင့် အပြစ်အပေါင်းမှ ကင်းလွှတ်ခွင့်ရအောင်လည်း တောင်းခံရန် မမေ့သင့်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါသည်။
ဘာရာသ် ညတွင် အောက်ပါဒိုအာကို အနည်းဆုံး သုံးကြိမ်ဖတ်က အလွန်သင့်တော်ပါသည်။ အဆုံးအနေဖြင့် တင်ပြလိုသည်မှာ မွတ်စ်လင် ညီနောင်အပေါင်းတို့ မိမိတို့သည် ကမ္ဘာ၏ အရှေ့အနောက် တောင်မြောက် အရပ်တိုင်းတွင် ရှိနေသည်။ အမေရိကမှာ မြန်မာ မွတ်စ်လင်တွေ ရှိသလို အခြား နိုင်ငံများ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာစီယံနိုင်ငံများ တောင်အမေရိကနှင့် သြစတေးလျှ နိုင်ငံတို့မှာလည်း ရှိပါသည်။ အချို့က မြန်မာနိုင်ငံ ပေါက် မွတ်စ်လင်တွေဖြစ်သလို ဟနဖီမဇ်ဟဗ် ၀င်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အချို့က ရှာဖအီ မဇ်ဟဗ်ဝင် တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ အချို့က အထက်ပါ ဟဒီးဆ်တော်တွေနှင့် ဘာရာသ် ညကို လက်ခံကျဉ်းပသလို အချို့က လက်မခံဘူးဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ တစ်ဦးကို တစ်ဦး နားလည်သဘောပေါက်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယူနီတီ တစ်ခု ရလာနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးငြိမ်းချမ်း နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ အာမီးန်။
بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالِّذكْرِ الْحَكِيمِ ، وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، أَقُولُ قَوْلِي هذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، فَاسْتَغْفِرُوهُ فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَا نَجَاةَ التَّائِبِينَ .
မော်လာနာ မုဟမ္မဒ် အက္က်ဘရ်ရှားဟ်
Special thanks to U Kamal Myo Myint
Posted by Ordinary person at 12:42 AM 1 comment:
Posted by Ordinary person at 10:12 PM No comments: